Weeraradii Ugu Dambeeyay Ee Muqdisho ka Dhacay Oo dhakafaar ku riday Madaxda Ugu Sarreysa Dowladda,
Saturday March 30, 2019 - 17:41:24 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Howlagallada aan kala joogsiga laheyn ee ciidamada Al Shabaab ay ka fulinayaan gudaha magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka ayaa jiha wareer ka dhax riday saraakiisha ugu sarraysa dowladda Federaalka Soomaaliya.
Fahad Yaasiin iyo Jeneraal Xijaar oo wada fadhiya
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Farmaajo iyo Kheyre ay isku maandhaafeen qaabka loo wajahayo amniga magaalada caasimadda ah iyo mashaakilaadka ka dhax taagan ciidamada dowladda ee mushaar la'aantu dilootay.
Farmaajo ayaa go'aan ku gaaray in uu isbedel ku sameeyo saraakiisha ciidamada dowladda isagoo aan wax latashi ah kala sameyn Xasan Cali Kheyre, isbedelka lagu sameeyay ciidamada waxaa ka mid ah in labaabi'iyay Abaanduulka ciidamada waxaana lasoo kordhiyay taliska ciidanka lugta iyo taliye ku xigeenka guud ee ciidamada.
Nin lagu magacaabo Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa loo magacaabay taliye ku xigeenka guud ee ciidamada halka Nin lagu magacaabo Jeneraal Odawaa laga dhigay taliyaha ciidamada lugta waxaana gabi ahaanba la baabi'iyay jagadii Abaanduulka.
Balse qeybtan cusub ee ciidamada lugta ayaa loo sameeyay abaanduule waxaana mas'uul ka ah nin lagu magacaabo Gen. C/rashiid C/llaahi Shire kaas oo muddo sanada ah kamid ahaa saraakisha ciidamada dowladda ee fadhiidka ah.
Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in isbedelkan uu Farmaajo sameeyay looga gol leeyahay in lagu mashquuliyo xildhibaannada Baarlamaanka oo ku hanjabay in ay kalsoonida kala noqon doono xukuumadda Xasan Cali Kheyre, weerarada Al Shabaab ayaa larumeysanyahay in aysan joogsan doonin sidii horay looga bartay.